အားအပြည့်သွင်းဖို့ ၃၅မိနစ်သာ လိုတဲ့ Oppo Find X (Lamborghini Edition) – DigitalTimes.com.mm
Oppo အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ Flagship မျိူးဆက်သစ် စမတ်ဖုန်း ဖြစ်တဲ့ Oppo Find X ကို မနေ့က မိတ်ဆက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ Oppo Find X အပြင် အီတလီနိုင်ငံရှိ ကားကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခု ဖြစ်တဲ့ Lamborghini နဲ့အတူ ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်ထားတဲ့ အထူးထုတ်မော်ဒယ် တစ်မျိူးကိုလည်း ထပ်မံ မိတ်ဆက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ Oppo Find X (Lamborghini Edition) ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Find X (Lamborghini Edition) မှာ Super VOOC လို့ ခေါ်တဲ့ အမြန်အားသွင်းစနစ် ပါဝင်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Super VOOC အမြန်အားသွင်းစနစ်က Find X (Lamborghini Edition) မှာ ထည့်သွင်းထားတဲ့ 3400mAh ဘက်ထရီကို0to 100 အားသွင်းဖို့အတွက် ၃၅မိနစ်သာ လိုအပ်ပါတယ်လို့ Oppo က ပြောကြားထားပါတယ်။ သာမန် Find X မော်ဒယ်မှာတော့ VOOC အားသွင်းစနစ်သာ ပါဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လောလောဆယ်မှာတော့ Oppo ရဲ့ Super VOOC က အားသွင်းစနစ် အမြန်ဆုံး နည်းပညာအဖြစ် ရပ်တည်နေပါတယ်။ OnePlus စမတ်ဖုန်းတွေမှာ ပါဝင်တဲ့ Dash Charge ဆိုတာကလည်း Oppo ရဲ့ VOOC စနစ်ကို အခြေခံပြီး တည်ဆောက်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Find X (Lamborghini Edition) မှာ 3400mAh နဲ့ Storage 512GB ပါဝင်တာက လွဲပြီး တခြား Specification တွေကတော့ Find X နဲ့ ပြောင်းလဲသွားခြင်း မရှိပါဘူး။ နောက်ကျောဘက်မှာတော့ Glass အစား Carbon Fiber Texture ကို အသုံးပြုထားပြီး Lamborghini logo ပါဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Find X (Lamborghini Edition) မော်ဒယ်ရဲ့ ဈေးနှုန်းကတော့ ယူရို ၁၆၉၉ (မြန်မာငွေ ၂၇သိန်း ဝန်းကျင်) ဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်း မြင်ပြီး လန့်သွားလား ? မလန့်ပါနဲ့၊ Lamborghini Edition ပါဆို အဲ့လောက်တော့ ရှိမှာပေါ့။ Huawei ရဲ့ Porsche Design Mate RS (512GB) တောင် ယူရို ၂၀၉၅ (မြန်မာငွေ ၃၃သိန်း ဝန်းကျင်) ရှိသေးတာဘဲ။ ဒါ့ပေမယ့် Porsche Design Mate RS က Under Display Fingerprint Sensor နဲ့ Triple Camera တွေ ပါဝင်ပါတယ်။
Ref: theverge, xdadeveloper
အားအပွညျ့သှငျးဖို့ ၃၅မိနဈသာ လိုတဲ့ Oppo Find X (Lamborghini Edition)
Oppo အနနေဲ့ သူတို့ရဲ့ Flagship မြိူးဆကျသဈ စမတျဖုနျး ဖွဈတဲ့ Oppo Find X ကို မနကေ့ မိတျဆကျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ Oppo Find X အပွငျ အီတလီနိုငျငံရှိ ကားကုမ်ပဏီကွီးတဈခု ဖွဈတဲ့ Lamborghini နဲ့အတူ ပူးပေါငျးထုတျလုပျထားတဲ့ အထူးထုတျမျောဒယျ တဈမြိူးကိုလညျး ထပျမံ မိတျဆကျခဲ့ပါသေးတယျ။ Oppo Find X (Lamborghini Edition) ဘဲ ဖွဈပါတယျ။
Find X (Lamborghini Edition) မှာ Super VOOC လို့ ချေါတဲ့ အမွနျအားသှငျးစနဈ ပါဝငျလာမှာ ဖွဈပါတယျ။ Super VOOC အမွနျအားသှငျးစနဈက Find X (Lamborghini Edition) မှာ ထညျ့သှငျးထားတဲ့ 3400mAh ဘကျထရီကို0to 100 အားသှငျးဖို့အတှကျ ၃၅မိနဈသာ လိုအပျပါတယျလို့ Oppo က ပွောကွားထားပါတယျ။ သာမနျ Find X မျောဒယျမှာတော့ VOOC အားသှငျးစနဈသာ ပါဝငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ လောလောဆယျမှာတော့ Oppo ရဲ့ Super VOOC က အားသှငျးစနဈ အမွနျဆုံး နညျးပညာအဖွဈ ရပျတညျနပေါတယျ။ OnePlus စမတျဖုနျးတှမှော ပါဝငျတဲ့ Dash Charge ဆိုတာကလညျး Oppo ရဲ့ VOOC စနဈကို အခွခေံပွီး တညျဆောကျထားတာ ဖွဈပါတယျ။
Find X (Lamborghini Edition) မှာ 3400mAh နဲ့ Storage 512GB ပါဝငျတာက လှဲပွီး တခွား Specification တှကေတော့ Find X နဲ့ ပွောငျးလဲသှားခွငျး မရှိပါဘူး။ နောကျကြောဘကျမှာတော့ Glass အစား Carbon Fiber Texture ကို အသုံးပွုထားပွီး Lamborghini logo ပါဝငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
Find X (Lamborghini Edition) မျောဒယျရဲ့ စြေးနှုနျးကတော့ ယူရို ၁၆၉၉ (မွနျမာငှေ ၂၇သိနျး ဝနျးကငျြ) ဖွဈပါတယျ။ စြေးနှုနျး မွငျပွီး လနျ့သှားလား ? မလနျ့ပါနဲ့၊ Lamborghini Edition ပါဆို အဲ့လောကျတော့ ရှိမှာပေါ့။ Huawei ရဲ့ Porsche Design Mate RS (512GB) တောငျ ယူရို ၂၀၉၅ (မွနျမာငှေ ၃၃သိနျး ဝနျးကငျြ) ရှိသေးတာဘဲ။ ဒါ့ပမေယျ့ Porsche Design Mate RS က Under Display Fingerprint Sensor နဲ့ Triple Camera တှေ ပါဝငျပါတယျ။
LamborghiniOppo Find X Lamborghini